ခရီးသည် ကြိုရန် သုံးဘီး ယာဉ်ငှားရာ စကားများရန်ဖြစ်ပြီး ခရီးသည်မှ သုံးဘီး ယာဉ်‌မောင်းကို ကတ်ကြေးဖြင့် ထိုးမှု ဖြစ်ပွား – Shwe Ba
မန္တလေး တံတားဦး လေဆိပ် သို့ ခရီးသည် ကြိုရန် အတွက် သုံးဘီး ယာဉ်ငှား ရာမှ ခရီး သည်နှင့် သုံးဘီး ယာဉ်မောင်း တို့ အချင်းများ မှုဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီး ခရီးသည် မှ ယာဉ်‌မောင်း အား ကတ်ကြေးဖြင့် ထိုး မှု ဩဂုတ် (၁)ရက် က ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း လေ ဆိပ် နယ်မြေ ရဲစခန်းမှ သတင်းရ ရှိသည်။
ဖြစ်စဉ် မှာ ဩဂုတ် ၁ ရက် နံနက်၉ နာရီခွဲ ခန့်က တံတားဦးလေဆိပ်သို့ ခရီးသည်ကြိုရန် ဦး….(၆ဝနှစ်) မောင်းနှင်သည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်အား ကို….(၃၂နှစ်)က ငှားရမ်းခဲ့ရာမှ အချင်းများမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ခရီးသည် ကြိုရန် သုံးဘီးယာဉ် အား ငှားရမ်း ပြီး တံတား ဦး လေဆိပ် သို့သွားရောက် ခဲ့ရာ ကြိုမည့် ခရီးသည် မပါလာ သဖြင့် ပြန် ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် လေဆိပ်မှ အပြန် အထွက်လမ်း မိုင်တိုင်(၄/၆)အရောက် တွင် သုံးဘီးယာဉ် အား ရပ်ခိုင်း ခဲ့ကြောင်း၊ ခရီး သည် စောင့်‌ရသည် မှာကြာသဖြင့် ပိုက်ဆံ တိုးပေးရန် သုံးဘီးမောင်း သူမှ ပြောကြား ခဲ့ရာ ငှားရမ်း သူမှလည်း မပေး နိုင်ကြောင်း ပြန် လှန်ပြောဆို ရင်း စကားများ ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းသို့ဖြစ်ပွား ရာ ငှားရမ်း သူမှ သုံးဘီးပေါ်ရှိ ကတ်ကြေးဖြင့် သုံးဘီး ယာဉ် မောင်း၏ လည်ပင်းအား ထိုးခဲ့ သည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ် စဉ်နှင့်ပတ်သက် ၍ တံတားဦး လေဆိပ် ရဲစခန်းသို့ ဆက် သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ” ဖြစ်စဉ်က ဟုတ်ပါတယ်။ အမှုဖွ င့် အရေးယူထား ပါတယ်။ အသက် အန္တရာယ်အခြေနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လောလော ဆယ် မသိရသေးပါဘူး “ဟု ရဲအုပ် ဘုန်းကျော်နိုင်က ‌ဖြေကြား ခဲ့သည်။
ထို သို့ ကက်ကြေးဖြင့် ထိုး ခဲ့သဖြင့် သုံးဘီးယာဉ် မောင်း ဦး…. (၆ဝနှစ်) တွင် ဝဲ ၊ ယာ နားရွက် လည် ပင်း၊ ဝဲလက်ကြွယ်ပြတ် ရှဒဏ် ရာ ရရှိပြီး စိုးရိမ်ရကာ ဆေးကုသမှုခံယူနေရကြောင်း သိရသည်။သုံးဘီးယာဉ်မောင်းအား ကက်ကြေးဖြင့်ထိုးခဲ့ သူ ကို…(၃၂နှစ်)ကို လေဆိပ်နယ်မြေရဲစခန်းတွင် (ပ)၃၄/၂၀၂၀၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ၃၂၆ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း စုံစမ်း သိရသည်။
မန်တလေး တံတားဦး လဆေိပျ သို့ ခရီးသညျ ကွိုရနျ အတှကျ သုံးဘီး ယာဉျငှား ရာမှ ခရီး သညျနှငျ့ သုံးဘီး ယာဉျမောငျး တို့ အခငျြးမြား မှုဖွဈပှား ခဲ့ပွီး ခရီးသညျ မှ ယာဉျ‌မောငျး အား ကတျကွေးဖွငျ့ ထိုး မှု ဩဂုတျ (၁)ရကျ က ဖွဈျပှား ခဲ့ကွောငျး လေ ဆိပျ နယျမွေ ရဲစခနျးမှ သတငျးရ ရှိသညျ ။ဖွဈစဉျ မှာ ဩဂုတျ ၁ ရကျ နံနကျ၉ နာရီခှဲ ခနျ့က တံတားဦးလဆေိပျသို့ ခရီးသညျကွိုရနျ ဦး….(၆ဝနှဈ) မောငျးနှငျသညျ့ သုံးဘီးဆိုငျကယျအား ကို….(၃၂နှဈ)က ငှားရမျးခဲ့ရာမှ အခငျြးမြားမှု ဖွဈပှားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျဟု သိရသညျ။
ခရီးသညျ ကွိုရနျ သုံးဘီးယာဉျ အား ငှားရမျး ပွီး တံတား ဦး လဆေိပျ သို့သှားရောကျ ခဲ့ရာ ကွိုမညျ့ ခရီးသညျ မပါလာ သဖွငျ့ ပွနျ ခဲ့ကွောငျး၊ ထို့နောကျ လဆေိပျမှ အပွနျ အထှကျလမျး မိုငျတိုငျ(၄/၆)အရောကျ တှငျ သုံးဘီးယာဉျ အား ရပျခိုငျး ခဲ့ကွောငျး၊ ခရီး သညျ စောငျ့‌ရသညျ မှာကွာသဖွငျ့ ပိုကျဆံ တိုးပေးရနျ သုံးဘီးမောငျး သူမှ ပွောကွား ခဲ့ရာ ငှားရမျး သူမှလညျး မပေး နိုငျကွောငျး ပွနျ လှနျပွောဆို ရငျး စကားမြား ခဲ့ကွောငျး၊ ယငျးသို့ဖွဈပှား ရာ ငှားရမျး သူမှ သုံးဘီးပျေါရှိ ကတျကွေးဖွငျ့ သုံးဘီး ယာဉျ မောငျး၏ လညျပငျးအား ထိုးခဲ့ သညျဟု သိရသညျ။
အဆိုပါဖွဈျ စဉျနှငျ့ပတျသကျ ၍ တံတားဦး လဆေိပျ ရဲစခနျးသို့ ဆကျ သှယျမေးမွနျးခဲ့ရာ” ဖွဈစဉျက ဟုတျပါတယျ။ အမှုဖှ ငျ့ အရေးယူထား ပါတယျ။ အသကျ အန်တရာယျအခွနေနေဲ့ ပတျသကျပွီး လောလော ဆယျ မသိရသေးပါဘူး “ဟု ရဲအုပျ ဘုနျးကြျောနိုငျက ‌ဖွကွေား ခဲ့သညျ။
ထို သို့ ကကျကွေးဖွငျ့ ထိုး ခဲ့သဖွငျ့ သုံးဘီးယာဉျ မောငျး ဦး…. (၆ဝနှဈ) တှငျ ဝဲ ၊ ယာ နားရှကျ လညျ ပငျး၊ ဝဲလကျကွှယျပွတျ ရှဒဏျ ရာ ရရှိပွီး စိုးရိမျရကာ ဆေးကုသမှုခံယူနရေကွောငျး သိရသညျ။သုံးဘီးယာဉျမောငျးအား ကကျကွေးဖွငျ့ထိုးခဲ့ သူ ကို…(၃၂နှဈ)ကို လဆေိပျနယျမွရေဲစခနျးတှငျ (ပ)၃၄/၂၀၂၀၊ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ၃၂၆ ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ထားကွောငျး စုံစမျး သိရသညျ။
ပဲခူးမြို့ရှိ ကေတီဗီ တစ်ခုတွင် သီချင်း ဆိုနေသည့် အသက်(၃၂)နှစ် အရွယ် အမျိုးသား (၁)ဦး အမောဖောက်၍ သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွား